7 ဥရောပမှာအကောင်းဆုံးအခမဲ့လမ်းလျှောက်ခရီးစဉ် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >7ဥရောပမှာအကောင်းဆုံးအခမဲ့လမ်းလျှောက်ခရီးစဉ်
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 15/11/2020)
ဥရောပသို့မည်သည့်ခရီးစဉ်မဆိုအတွက်အကြံဥာဏ်များနှင့်အကြံပြုချက်များပါသောမရေမတွက်နိုင်သောလမ်းညွှန်စာအုပ်များရှိပါသည်, နှင့်ခရီးသွားမဆိုအမျိုးအစား. ဤလမ်းညွှန်စာအုပ်များသည်သမိုင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာရန်အလွန်ကောင်းပါသည်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကဥရောပရဲ့အတွင်းပိုင်းအကြံပေးချက်များအကြောင်းကိုသင်ပြောပြလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ. အခမဲ့လမ်းလျှောက်ခရီးစဉ်များသည်ဥရောပကိုရှာဖွေရန်စိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်, နောက်ပြီးဥရောပမြို့တိုင်းမှာအခမဲ့မြို့လမ်းလျှောက်ခရီးကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်.
အဆင်ပြေသောဖိနပ်ကိုဝတ်ဆင်, ငါတို့ခရီးသွားခြင်းငှါထွက်သွားသောကြောင့်၊7ဥရောပမှာအကောင်းဆုံးအခမဲ့လမ်းလျှောက်ခရီးစဉ်.
အင်္ဂလိပ်စကားပြောလမ်းညွှန်သည်သင့်ကိုတွေ့လိမ့်မည် နာနတ်သီးဘော်ဒါဆောင် အဘို့အဟောငျးမြို့၌တည်၏ 2.5 နာရီ’ ပရာ့ဂ်န်းကျင်လမ်းလျှောက်ခရီး. သငျသညျကျော်ကြားသော Old Town ရင်ပြင်၌လမ်းလျှောက်ခရီးစတင်ပါလိမ့်မယ်, အထင်ကရချားလ်စ်တံတားမှဆက်လက်. ခရီးသွား center ည့်စင်တာမှသည်နေ့လည်စာနှင့်သောက်စရာများအတွက်မြို့၏အကောင်းဆုံးအစက်အပြောက်အထိ, ပရာ့ဂ်ရဲ့လုပ်မနှင့်မကျင့်, သင်ဘယ်တော့မှလမ်းညွှန်စာအုပ်ထဲမှာဘယ်တော့မှမဖတ်နိူင်တဲ့အကြံပြုချက်များနဲ့ပုံပြင်များများစွာနဲ့ခရီးကိုအဆုံးသတ်လိမ့်မယ်.
ပရာ့ဂ်မြို့၏အခမဲ့မြို့လမ်းလျှောက်ခရီးစဉ်သည်တစ်ခုဖြစ်သည်7ဥရောပမှာအကောင်းဆုံးလမ်းလျှောက်ခရီးစဉ်, ဘာလို့လဲဆိုတော့အထူးလမ်းညွှန်၏. Prague ကိုရှာဖွေရန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာခရီးစဉ်ကိုသင်ထွက်ခွာမည်, နှင့်တတ်နိုင်သောနေ့လည်စာ menus တွေပူဇော်ပူဇော်စားသောက်ဆိုင်၏ကြီးစွာသောစာရင်းနှင့်အတူ. ဖြည့်စွက်ကာ, အကောင်းဆုံးချက်ချက်ဘီယာအတွက် bar-hopping အကြောင်းလေ့လာရပါမည်, နှင့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ပရာ့ဂ်၏အကောင်းဆုံးအမြင်များ.
2. အမ်စတာဒမ်, နယ်သာလန်
အမ်စတာဒမ်ရဲ့အခမဲ့လမ်းလျှောက်ခရီးစဉ်, ထို့အပြင် FreeDam မြို့လမ်းလျှောက်ခရီးအဖြစ်လူသိများ, အားလုံးသည်ဥရောပရှိအလွတ်မြောက်ဆုံးသောမြို့တော်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်ပျော်မွေ့ခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်. ၃ နာရီကြာလမ်းလျှောက်သည့်ခရီးစဉ်အတွက်စတော့အိတ်ချိန်းရှိအစည်းအဝေးကျင်းပရာမှနေ့စဉ်ထွက်ခွာသည်, ဟောငျးအမ်စတာဒမ်ရဲ့ဒဏ္endsာရီကနေခေတ်သစ်နှင့်ခေတ်မှီအမ်စတာဒမ်ရဲ့ပုံပြင်များရန်.
ဤကာလအတွင်း3ပျော်စရာနာရီ, သင်သည်ကမ္ဘာတဝှမ်းမှခရီးသွားများနှင့်တွေ့ဆုံပြီးအမ်စတာဒမ်၏လစ်ဘရယ်မူးယစ်ဆေးဝါးပေါ်လစီအကြောင်းလေ့လာလိမ့်မည်, အနီရောင်အလင်းအိမ်ခရိုင်, နိုင်ငံရေး, နှင့်လမ်းပြကနေသမိုင်း’ ရယ်စရာပုံပြင်များ. ဖြည့်စွက်ကာ, အခမဲ့လမ်းလျှောက်ခရီးစဉ်အပေါ်, သငျသညျအပေါ်လမ်းညွှန်ကနေအတွင်းအကြံပေးချက်များရနိုင်သည် အမ်စတာဒမ်မှအကောင်းဆုံးနေ့ခရီးစဉ် နှင့်ဥရောပတစ်လွှား.
ဘာလင်၏မူလအခမဲ့လမ်းလျှောက်မြို့ခရီးစဉ်သည်မြို့၏သမိုင်းကိုရှာဖွေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်, အထင်ကရ, နှင့်နာရီစုံတွဲတစ်တွဲအတွက်မီးမောင်းထိုးပြ. ၎င်းသည်ဂျာမနီရှိအပူဆုံးမြို့တစ်မြို့သို့နိဒါန်းလမ်းလျှောက်ခြင်းဖြစ်သည်, ကြွယ်ဝသောသမိုင်းနှင့်အတူ, နှင့်နိုင်ငံရေး.
သမိုင်းဝင်အထူးများအပြင်, ဘာလင်သည်ကွဲပြားခြားနားသောခရီးများကိုကမ်းလှမ်းပြီးဘာလင်ကိုထောင့်အမျိုးမျိုးမှပြသသည်; အနုပညာ, အစားသောင်းကြမ်းသူ, သို့မဟုတ်အချိုရည်’ ဗဟိုပြု. မူရင်းဘာလင်အခမဲ့မြို့လမ်းလျှောက်ခရီးစဉ်၌တည်၏, သင်လည်ပတ်မည်6ဘာလင်အတွက်အဓိကမှတ်တိုင်၏, နှင့်ဘာလင်မြို့ရိုးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုနောက်ကွယ်မှပုံပြင်များအကြောင်းကိုကြားပါ.
ဘာလင်ရဲ့မူလအခမဲ့မြို့လမ်းလျှောက်ခရီးစဉ်တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်အရွက်, မှာအစည်းအဝေးအချက်အနေဖြင့် “သေတမ်းစာ”. အဆိုပါလမ်းညွှန်မူရင်းအခမဲ့လမ်းလျှောက်ခရီးစဉ်ဘာလင်တီရှပ်တွင်စောင့်ဆိုင်းနေမည်ဖြစ်ပြီးမြို့တော်ရှိအကောင်းဆုံးပါတီနေရာများကိုအကြံပြုလိုသည်, ဘယ်လို ဘာလင်မှဂျာမနီရှိအခြားမြို့ကြီးများသို့ခရီးသွားခြင်း နှင့်အမျိုးသားသိုက်.
4. ဗင်းနစ်, အီတလီ
ဗင်းနစ်သည်အီတလီရှိအသေးငယ်ဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်. မည်သို့ပင်ဆိုစေ, သင်က၎င်း၏ကျဉ်းမြောင်းတဲ့လမ်းကြား၌လှည့်လည်ကြသောအခါနှင့်ဆုံးရှုံးသွားကြဖို့အလွန်လွယ်ကူသည်နှင့် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာဗိသုကာ. ဗင်းနစ်မြို့လွတ်လမ်းလျှောက်ခရီးစဉ်သည်သမိုင်းကိုဖြတ်သန်းသွားစေလိမ့်မည်, ယဉျကြေးမှု, အတတ်ပညာ, နှင့်အပေါ်ဗိသုကာ 2.5 နာရီခရီးစဉ်. Simona ရဲ့စိတ်အားထက်သန်တဲ့လမ်းညွှန်မြို့တော်အကြောင်းကိုမင်းတို့အားလုံးကိုပြောပြပါလိမ့်မယ်, အစားအစာ, နှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းအဘို့အစက်အပြောက်.
ဗင်းနစ်၏အခမဲ့လမ်းလျှောက်ခရီး၏မီးမောင်းထိုးပြ Simona သည်, လမ်းညွှန်, နှင့်ပျော်စရာလေထု. မည်သို့ပင်မိုးရွာရွာ, လူ ဦး ရေ, သငျသညျအလွအချိန်ရပါလိမ့်မယ်နှင့်အဘို့အအကြံပြုချက်များအများအပြားရလိမ့်မည် အီတလီအစားအစာ နှင့်ဗင်းနစ်တွင် Eprol အချိုရည်.
ပါရီသည်ဥရောပရှိခရီးသွား cities ည့်သည်များအများဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်, ကမ္ဘာကြီးထဲမှာဖော်ပြထားခြင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူး. Eiffel Tower နှင့် Avenue des Champs-Elysees တို့လာသောအခါတွင်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်, မြို့ရဲ့အထင်ကရဆိုဒ်များ၏မှော်ကိုခံစားရန်ခဲယဉ်းသည်. ဒါပေမဲ့, အခမဲ့လမ်းလျှောက်ခရီးစဉ်အပေါ်, သင်၏လမ်းညွှန်သည်ဤအထင်ကရအဆောက်အအုံများအနက်မှအကောင်းဆုံးကိုရရှိလိမ့်မည်, နှင့်များစွာသောထူးခြားတဲ့ပုံစံခရီးစဉ်အတွက်.
ပဲရစ်သည်လျှို့ဝှက်ကျောက်မျက်အမြောက်အမြား၏အိမ်ဖြစ်သည်, အရှင်အခမဲ့လမ်းလျှောက်ခရီးစဉ်၏အရေအတွက်အဆုံးမဲ့ဖြစ်ပါတယ်. နေ့ရောညပါလည်ပတ်မှုများရှိပါသည်, တိုင်းရပ်ကွက်အဘို့အခရီးစဉ်, အချက်အပြုတ်နှင့်အနုပညာခရီးစဉ်. သို့သျောလညျး, ပဲရစ်မြို့ရှိအကောင်းဆုံးအခမဲ့လမ်းလျှောက်ခရီးစဉ်ဖြစ်သည် လျှို့ဝှက်ကျောက်မျက် နှင့်လျှို့ဝှက်ချက်ပဲရစ်ခရီးစဉ်. အဆိုပါလမ်းပြ Louvre ၏ဝှက်ထားသောကျမ်းပိုဒ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုယူပါလိမ့်မယ်, ဓာတ်ပုံအစက်အပြောက်များမှအဆောက်အ ဦး များ, ဝေးလူအစုအဝေးကနေနှင့် Parisien ရဲ့နှလုံးထဲသို့.
6. Zurich ချောကလက်အခမဲ့လမ်းလျှောက်စီးတီးခရီးစဉ်
ကြီးစွာသောနှင့်ပျော်စရာလမ်းညွှန်အပြင်, ဇူးရစ်၏အကောင်းဆုံးအခမဲ့မြို့လမ်းလျှောက်ခရီးစဉ်အချက်အပြုတ်ကောင်းကင်ဘုံသည်. အဘယ်ကြောင့်အဟောင်းမြို့မှတဆင့်လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့် Zurich ရိုးရာစတိုင်အတွက်မီးမောင်းထိုးပြ, သငျသညျဘုရားသခငျဆွစ်ဇာလန်ချောကလက်နှင့်အတူကတက်မွှေးနိုင်ပါတယ်. မြည်းစမ်း truffles, ကိုကိုးထုတ်ယူခြင်းအကြောင်းကိုလေ့လာပြီးလေ့လာပါ ဥရောပမှာအကောင်းဆုံးချောကလက် Lindenhof နှင့် Grossmunster ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုသင်လေးစားမိပါတယ်.
ဇူးရစ်အခမဲ့လမ်းလျှောက်ခရီးစဉ်သည်2နာရီပေါင်းများစွာနှင့် Paradeplatz မှစနေနေ့တိုင်းထွက်ခွာသည်, မှတ်ပုံတင်ရန်မလိုအပ်ပါ.
7. ဗီယင်နာ, သြစတြီးယား
စတင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း ဗီယင်နာစူးစမ်း ဗီယင်နာကိုအခမဲ့မြို့လမ်းလျှောက်လှည့်လည်ရန်ကြိုဆိုပါသည်. ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်2နာရီပေါင်းများစွာသင်ဗီယင်နာနှင့်၎င်း၏အဓိကအထင်ကရသမိုင်းတိုတောင်းလိမ့်မည်, Marina မှနေ့လည်စာအတွက် Viennese အစားအစာကိုမြည်းစမ်းကြည့်ပါ, ဗီယင်နာအတွက်အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်တစ်ခု.
တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်, ဗီယင်နာပတ် ၀ န်းကျင်သမိုင်းဝင်ခရီးစဉ်အတွက် Albertina ရင်ပြင်မှာလမ်းညွှန်ကသင့်ကိုစောင့်နေလိမ့်မည်.
အခမဲ့လမ်းလျှောက်ခြင်းခရီးစဉ်နှင့်ပတ်သက်သောအကောင်းဆုံးအရာမှာလမ်းညွှန်ဖြစ်သည်. ခရီးစဉ်အများစုသည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ဖြစ်သော်လည်း, မြို့နှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိထားသင့်သမျှကိုအကောင်းဆုံးအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ပို့ပေးလိမ့်မည်. မေးခွန်းတိုင်းကိုဖြေကြားပေးပါလိမ့်မည်, အချစ်, နှင့်မြို့အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်. ဒုတိယအကောင်းဆုံးအရာက7ဥရောပမှာအကောင်းဆုံးမြို့လမ်းလျှောက်ခရီးစဉ်, သူတို့အခမဲ့ဖြစ်ကြောင်း, တိုတိုနှင့်အမှတ်ရန်, နှင့်ဆွဲဆောင်.
ဤအခမဲ့ Walking Tours ကတကယ်အခမဲ့ဖြစ်ကြသည်?
အခမဲ့မြို့လမ်းလျှောက်ခရီးစဉ်များအစွန်အဖျား -based ဖြစ်ကြသည်. အဓိပ္ပါယ်, ငွေပေးချေမှုအတွက်ခရီးစဉ်အတွက်နေရာတစ်ခုကြိုတင်စာရင်းသွင်းရန်မလိုအပ်ပါ, ဒါပေမယ့်ခရီးစဉ်ရဲ့အဆုံးမှာ, သငျသညျလှန်ခြင်းအားဖြင့်ကြီးစွာသောလမ်းညွှန်ကျေးဇူးတင်သင့်ပါတယ်.
Tipping သည်တစ်မြို့နှင့်တစ်မြို့ကွဲပြားသည်, သို့သော်ပျမ်းမျှအားဖြင့်အစွန်အဖျားသည်ယူရို ၅ မှ ၁၅ သို့ဖြစ်သည်.
အခမဲ့မြို့လမ်းလျှောက် tour ည့်လမ်းညွှန်များသည်အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာများတွင်သင့်ကိုတွေ့လိမ့်မည်, သင်သည်သူတို့၏ရှပ်အင်္ကျီအားဖြင့်သူတို့ကိုအသိအမှတ်မပြုပါလိမ့်မယ်. ဖြည့်စွက်ကာ, သူတို့သည်သင့်ထံသို့ထွက် လာ၍ သင့်ကိုနှုတ်ဆက်လိမ့်မည်.
အင်္ဂလိပ် မှလွဲ၍ အခြားဘာသာစကားများဖြင့်လျှောက်လှမ်းသောခရီးသွားများရှိပါသလား?
ဥရောပရှိအခမဲ့လမ်းလျှောက်ခရီးစဉ်အများစုမှာအင်္ဂလိပ်နှင့်ဒေသဆိုင်ရာဘာသာစကားများဖြင့်ခရီးစဉ်များစီစဉ်ပေးသည်, အခြားဘာသာစကားများအတွက်အနည်းငယ်ခရီးစဉ်နှင့်အတူ. ၎င်းသည်တစ်မြို့နှင့်တစ်မြို့ကွဲပြားသည်, နှင့်ခရီးသွားအော်ပရေတာများ.
ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, သင်၏အကောင်းဆုံးဥရောပမြို့များနှင့်ရထားများဖြင့်လမ်းလျှောက်ခရီးစဉ်များကိုစီစဉ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါမည်.
သင်၏ဘလော့ဂ်ကို“ ဥရောပတွင်အကောင်းဆုံးအခမဲ့လမ်းလျှောက်မှု ၇ ခု "ကိုသင်၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွင်ထည့်သွင်းလိုပါသလား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-free-walking-tours-europe%2F ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, သငျတို့သက de နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများမှ / fr အဆိုပါ / zh-CN ကိုပြောင်းလဲရန်သို့မဟုတ် / လို့ရပါတယ်.
#traveleurope #လမ်းလျှောက် မြို့ပြ ဥရောပသမဂ္ဂ ရထားခရီးသွား ခရီးသွား ပုဂံ TravelToAmsterdam Tရာဝတီ